Play DLNA ọdịnaya site na iji VLC
D 1.3 Play Videos na VLC na airplay
1.6 Play M4V na VLC
1.7 Play RTMP na VLC
1.8 Play ISO na VLC
1.9 Play AVI na VLC
1.10 Play WMV na VLC
1.11 Play Midi na VLC
1,12 Play 3D Movies na VLC
1,13 Play Sopcast na VLC
1,14 FLAC na-egwu
1,15 MP4 na-egwu
1,16 FLV na-egwu
1,17 MKV na-egwu
1,18 MOV na-egwu
1,19 UNDF na-egwu
1.20 Iji VLC maka PS3
6.9 VLC Web ngwa mgbakwunye
6,10 Ime Control VLC
6,12 VLC Uzo mkpirisi
6,13 ihuenyo Capture na VLC
6,14 mmekọrịta VLC Audio
6,18 Snapshots na VLC
6,19 ịgbanwe XBMC ka VLC
6,20 Bụ VLC Nchekwa
VLC ike ga-eji dị ka UPnP / DLNA ahịa ma ọ bụ ọkpụkpọ na-egwu video ma ọ bụ ọdịyo ọdịnaya nke ọ bụla UPnP / nkesa DLNA na netwọk. Gịnị bụ a UPnP / DLNA media nkesa - ọ na-eji na-enuba video na ọdịyo faịlụ ka ọ bụla UPnP / DLNA ọkpụkpọ ma ọ bụ ahịa dị ka VLC on n'ụlọ gị gị na netwọk, ihe atụ ga-Real Media. Na nke a post, anyị ga na-ekwurịta otú e si akpọ DLNA ọdịnaya site na iji VLC na zuru ezu na ndị mara mma n'aka na mgbe na-agụ ya ebe a ị ga-enweghị obi abụọ ọ bụla na okwu a.
Part 1. Play DLNA ọdịnaya site na iji VLC on Windows
Part 2. Play DLNA ọdịnaya site na iji VLC
Part 3. Olee otú m jikọọ VLC ka a mara na ihe nkesa DLNA na Windows na Mac?
Part 1: Play DLNA ọdịnaya site na iji VLC on Windows
Na-agba ọsọ VLC na-aga ele> Playlist. Họrọ Universal nkwụnye n Play nhọrọ si ekpe kọlụm.
VLC Media Player ga-agbali iji chọta niile UPnP / DLNA sava dị na netwọk gị na-egosipụta na ha. Mgbe ị pịa gị na ihe nkesa, a dropdown akụ kwesịrị-egosi na aka-ekpe-n'akụkụ nke nkesa (a nwere ike iwe oge ụfọdụ. Ị nwere ike ugbu a gaa site na ndepụta nke ọdịnaya nchekwa na nkesa.
Right pịa na faịlụ ị ga-achọ na na na VLC na họrọ Tinye ka playlist. Nke a bụ ihe magburu onwe oke maka ọdịyo faịlụ. N'ihi video faịlụ Otú ọ dị, ị kwesịrị ị na nri pịa ma họrọ nhọrọ nke Play ele ya ozugbo.
Cheta na: VLC nwere ike iri a otutu oge (sịnụ 5-10 nkeji) gosipụta dropdown akụ n'akuku aha ihe nkesa ebe ọ agbali sere dum nchekwa ndepụta site na ihe nkesa. Nsogbu a maara na mmepe nke VLC.
Part 2: Play DLNA ọdịnaya site na iji VLC
Malite VLC na kọmputa gị, họrọ Ngwaọrụ> Mmasị> All> Playlist> Services na Discovery na mgbe ahụ na-amalite Universal ikwunye na Play (UPnP).
Ugbu a, gaa VLC isi menu ọzọ ma họrọ Lee> Playlist, pịgharịa gaa na nhọrọ nke Obodo Network> Universal ikwunye na Play na họrọ ya.
Ọ ga-ewe banyere 20-30 sekọnd n'ihi na gị media ozi-emere na isi window nke VLC. Mgbe ị họrọ ya, ọ ga-egosi niile nchekwa na faịlụ a na-eje ozi ugbu a na-na maka ojiji.
Cheta na: Mgbe VLC 2.x update, ozugbo nwere ike na-aga na nzọụkwụ: View> Playlist> Obodo Network> Universal Plug'n'Play ka họrọ DLNA ọrụ na netwọk na mmiri iyi ha.
Nkebi nke 3: Olee otú m jikọọ VLC ka a mara na ihe nkesa DLNA na Windows na Mac?
Na nsụgharị VLC 2.x na ndị na kemgbe ahụ, otu onye nwere ike ịnweta ihe nkesa DLNA na-akọrọ site na ịga na-ele> Playlist. Nke a na-emeghe na playlist ele si ebe ị pụrụ nanị họrọ nhọrọ nke Obodo Network> Universal Plug'n'Play ebe ị ga-ahụ gị niile na-ahụ anya Amalite Ijekọ nchekwa na faịlụ.
Cheta na: Ke okenye VLC nsụgharị na ọ bụ na a dị iche iche ebe na otú ị ga-aga Ngwaọrụ> Mmasị> All> Playlist> Services na Discovery, wee nwee Universal ikwunye na Play (UPnP).
VLC adịghị ahụ UPnP ngwaọrụ
Nke a bụ a nkịtị nke na ọtụtụ a ugboro nanị ụzọ dozie nke a bụ ka ịgbanwee azụ VLC 2,08 version ebe ọ na-arụ ọrụ ezi-enweghị-enye ihe ọ bụla ọzọ mbipụta.
VLC mkpọka mgbe ejikọta MiniDLNA nkesa
Ọzọ, nke a nwere ime na ọhụrụ VLC mmelite. Iji zere n'iyi mgbe ejikọta MiniDLNA nkesa, ọtụtụ ndị achọpụtala ịmafe azụ VLC 2,08 dị ka a na-arụ ọrụ ngwọta.
Cheta na: Thecreators nke VLC, VideoLAN maara nke a nke na-arụ ọrụ n'ebe idozi ha.
Jiri VLC maka Windows 8 were were!
VLC web plugins maka top nchọgharị
> Resource> VLC> Olee otú igwu egwu DLNA ọdịnaya site na iji VLC